हिन्दुध’र्म अनुसार भगवानलाई किन फुल च’ढाउने गर्दछ र चढाएको फूल कसरी से’लाउन सकिन्छ ? जन्नुहोला !! - Kohalpur Trends
हिन्दुध’र्म अनुसार भगवानलाई किन फुल च’ढाउने गर्दछ र चढाएको फूल कसरी से’लाउन सकिन्छ ? जन्नुहोला !!
काठमाडौँ : हिन्दुधर्ममा भगवानको मु’र्ती, प्रतिमा वा फोटोमा फूल अ’र्पण गर्ने प’रम्परा छ । यसरी भगवानलाई फूल अ’र्पण गर्दा श्र’द्धालुको मनोकामना पुरा हुने धा’र्मिक वि’श्वास छ ।मानिसहरु घरमा भगवानको मु’र्ती वा प्रतिमा स्थापित गरेर फूल चढाउने गर्दछन् । तर यसरी च’ढाइएका फूल ज’लाशयमा से’लाउने चलन छ । तर कु’हिएको फूल ज’लासयमा हा’ल्दा यसले फो’हर हुने गर्दछ । त्यसो भए भगवानको पूजामा चढाइएको फूललाई के गर्ने ?
१. भगवानलाई चढाइएको फूल से’लाउँदा फूलको अ’पमान नहुने ठाउँमा राख्नुपर्छ । सकेसम्म यसलाई खुट्टाले टे’क्नु हुदैन ।२. भगवानलाई चढाएको फूल ओ’इलिएपछि त्यसलाई पहिले आफ्नो नि’धारमा टाँ’सेर आँगनको तुलसी वा मन्दिर परिसरको कुनै रुखको फेदमा से’लाउनुपर्छ ।३. रुखमुनि ओ’इलाएको फूल राख्दा यसले रुखलाई मलको रुपमा काम गर्दछ । जसबाट रुखले पोषक तत्व पाउँछ साथै अन्यत्र फो’होर पनि हुदैँन ।
४. भगवानलाई अर्पित गरिएका सबै वस्तु पवित्र हुने भएकाले फूल समेत पवित्र मानिन्छन् । तसर्थ भगवानलाई चढाइएको फूल जहाँ पायो त्यहा फ्या’केर अ’पमान गर्नु हुदैन ।५. फूल मात्र होइन भगवानलाई चढाएको प्रसाद पनि लामो समयसम्म राख्नु हुदैन । यसलाइृ पूजा समापन भए लगत्तै भ’क्तहरू माझ बाड्नु पर्दछ । यदि बाकीँ रहेमा कुनै प’शुलाई ख्वाउनु पर्दछ ।
The put up हिन्दुध’र्म अनुसार भगवानलाई किन फुल च’ढाउने गर्दछ र चढाएको फूल कसरी से’लाउन सकिन्छ ? जन्नुहोला !! appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: एमसीसीविरुद्ध माइतीघरमा २२ दलको प्रदर्शन
Next Next post: वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा तस्कर र प्रहरीबीच झडप, असइ घाइते